Dowlada Kenya oo waqti kama dambeys ah u qabatay xiritaanka xerada qaxootiga Dhadhaab – STAR FM SOMALIA
Wasiirka arrimaha gudaha dowlada Kenya Joseph Nkaisserry ayaa sheegay in bisha November ee sanadkan la xiri doono xerada qaxootiga Dhadhaab oo ay ku nool yihiin qaxooti gaaraya 300,000 oo Soomaali ah.
Mr Nkaisserry ayaa sheegay in dowladiisu ay kala shaqeyn doonto Qaramada Midoobay iyo dowlada Soomaaliya sidii dib loogu celin lahaa dalkooda qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool xeradaas.
Xerada qaxootiga ee Dhadhaab ayaa la aasaasay sanadkii 1991kii xilligaasoo kumanaan ruux ay ka soo carareen dagaaladii sokeeye ee dalka Soomaaliya ka bilowday. Dadka ku nool xerada dhadhaab ayaa degenaa muddo ka badan labaatan sano.
Kenya ayaa sheegtay in ay u xireyso xerada qaxootiga sababo ammaan awgeed, waxayna ku tilmaantay xerada Dhadhaab goob laga soo abaabulo weerarada hubeysan ee ka dhaca dalkeeda.
Hase yeeshee Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in aysan jirin cadeymo dhab ah oo tilmaamaya in xerada qaxootiga ay hoy u tahay argagaxisada.
Warkan ka soo baxay Wasiirka Arrimaha Gudaha dowlada Kenya ayaa ku soo beegmaya xilli ay magaalada Nairobi uu ka dhacay kulan saddex geesood ah kaasoo ay yeesheen wasiiro arrimo dibadeedyada Soomaaliya iyo Kenya iyo Wakiilka Hay’ada Qaxootiga Qaramada Midoobay u fadhiya Kenya. Kulankan ayaa waxaa ka soo baxay in dib u celinta qaxootiga ay noqoto mid loo raaco heshiiskii hore ay saddexda dhinac u gaareen uuna noqdaa mid si mutadawacnimo ah dadka loogu celiyo dalkooda.
Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya Cabdsalan Hadliye ayaa ugaga mahadceliyay dowlada Kenya soo dhoweynta qaxootiga Soomaaliyeed isagoo sheegay in qaxootigan aysan dareemin intii ay ka maqnaayeen dalkooda inay dal shisheeye joogaan,
Wasiirka Arrimaha Gudaha dowlada Kenya Mr Nkaisserry ayaa sheegay in go’aankan uu yahay kii ugu dambeeyay ayna dowlada Kenya u diyaarisay lacag gaareysa $10m (£6.8m) dib u dejinta qaxootiga xerada Dhadhaab.